Dhowr maalmood ka hor, 6-dii Febraayo 2018, ayaa Qaramada Midoobey xustay “Maalintii Cidhibtirka Gudniinka Dumarka.” Arrinta welwelka leh ee warbixintii ugu dambeysey lagu xusay waa in Soomaaliya (98%) iyo Jabuuti (93%) ay kaalinta 1-aad iyo ta 3-aad kaga jiraan waddam...
Dadka Soomaalidu meel kasta oo ay ku nool yihiinba waxay iskaga mid yihiin ku dhaqanka caadada xun ee ah gudniinka gabdhaha. Warbixinada qaarkood ayaa sheegaya in 95% gabdhaha Soomaaliya ku nool la gudo. Xataa, Soomaali badan oo qurbaha ku nool ayaa gabdhahooda Bariga...
Waxaa la qiyaasay inay Soomaaliya tahay meesha ugu xun adduunka ee hooyo lagu noqdo. Warbixin loogu magac daray "Xaaladda Hooyooyinka Adduunka" oo ay sannad kasta daabacdo Save the Children ayaa la isku barbardhigay 179 waddan, hadday noqoto dhinaca caafimaadka hooyada...